ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ 2020 Asia Model Awards ဆုကိုရရှိခဲ့တဲ့ ဖွေးစိန်…. – Shwewiki.com
ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ 2020 Asia Model Awards ဆုကိုရရှိခဲ့တဲ့ ဖွေးစိန်….
December 6, 2020 By admin Celebrity
ပရိသတ်ကြီးရေ ဖွေးစိန်လို့ ချစ်စနိုးခေါ်ရတဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး ဖွေးဖွေးကတော့ ကျရာ ဇာတ်ရုပ်ကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အပြင် သဘာဝကျလွန်းတဲ့ မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အကယ်ဒမီဆုတွေကိုလည်း ထိုက်တန်စွာရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ ။
လတ်တလောမှာတော့ ပရိသတ်တွေကို ဖွေးစိန်က 2020 Asia Model Awards ဆုကို ရရှိခဲ့တဲ့ သတင်းကောင်းလေးကို ပြောပြလာခဲ့ပါတယ် ။
Thank You untact 2020 Asia Model Awards in Seoul ! Thank You For choosing me ! ကိုဗစ်ကာလ ဖြစ်လို့ Seoul ကို မသွားရတော့ဘဲ Asia Special Award ဆုကတော့ Korea ကလှမ်းပို့လိုက်လို့ ဖွေးလက်ထဲရောက်နေပါပြီရှင့် ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ
ဒီဆုလေးကို ရရှိခဲ့တဲ့အတွက် အရမ်းကို ပျော်ရွှင်နေကြောင်း ဖွေးစိန်က သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထက်ကနေ တဆင့် ပရိသတ်တွေကို အသိပေးလာခဲ့တာပါ ။
နောက်နေ့မှ ကျေးဇူးတင်စကားကို စာရှည်ရှည်ရေးပြီး အမှတ်တရပုံရိုက်ပြီးတင်တော့မယ်လို့လည်းရေးသားထားပါသေးတယ် ။
ဖွေးစိန်လေးက သူမကို ဒီ Career တလျှောက်လုံးချစ်ပေး အားပေးခဲ့ကြတဲ့ ဆရာ၊ မိဘ၊ ဖွေးကို ချစ်ပေးသူ Darlings ၊ Oopsies တစ်ဦးတယောက်ချင်းစီ တိုင်း အတွက် ယူတဲ့ ဆုလေးဖြစ်ပါတယ်လို့ ပရိသတ်တွေကို ချစ်စဖွယ်စကားလေးဆိုခဲ့ပါသေးတယ် ။
ဒါ့အပြင် သူမဒီဆုလေးကို ရတဲ့အတွက် သူမကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေအားလုံး ဂုဏ်ယူနေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ ..။
ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်…..
ပရိသတ္ႀကီးေရ ေဖြးစိန္လို႔ ခ်စ္စႏိုးေခၚရတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသမီးေခ်ာေလး ေဖြးေဖြးကေတာ့ က်ရာ ဇာတ္႐ုပ္ကို ပီျပင္ေအာင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့အျပင္ သဘာဝက်လြန္းတဲ့ မင္းသမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး အကယ္ဒမီဆုေတြကိုလည္း ထိုက္တန္စြာရွိထားတဲ့ အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ပါ ။
လတ္တေလာမွာေတာ့ ပရိသတ္ေတြကို ေဖြးစိန္က 2020 Asia Model Awards ဆုကို ရရွိခဲ့တဲ့ သတင္းေကာင္းေလးကို ေျပာျပလာခဲ့ပါတယ္ ။
Thank You untact 2020 Asia Model Awards in Seoul ! Thank You For choosing me ! ကိုဗစ္ကာလ ျဖစ္လို႔ Seoul ကို မသြားရေတာ့ဘဲ Asia Special Award ဆုကေတာ့ Korea ကလွမ္းပို႔လိုက္လို႔ ေဖြးလက္ထဲေရာက္ေနပါၿပီရွင့္ ဆိုတဲ့စာသားေလးနဲ႔အတူ
ဒီဆုေလးကို ရရွိခဲ့တဲ့အတြက္ အရမ္းကို ေပ်ာ္႐ႊင္ေနေၾကာင္း ေဖြးစိန္က သူမရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာထက္ကေန တဆင့္ ပရိသတ္ေတြကို အသိေပးလာခဲ့တာပါ ။
ေနာက္ေန႔မွ ေက်းဇူးတင္စကားကို စာရွည္ရွည္ေရးၿပီး အမွတ္တရပုံ႐ိုက္ၿပီးတင္ေတာ့မယ္လို႔လည္းေရးသားထားပါေသးတယ္ ။
ေဖြးစိန္ေလးက သူမကို ဒီ Career တေလွ်ာက္လုံးခ်စ္ေပး အားေပးခဲ့ၾကတဲ့ ဆရာ၊ မိဘ၊ ေဖြးကို ခ်စ္ေပးသူ Darlings ၊ Oopsies တစ္ဦးတေယာက္ခ်င္းစီ တိုင္း အတြက္ ယူတဲ့ ဆုေလးျဖစ္ပါတယ္လို႔ ပရိသတ္ေတြကို ခ်စ္စဖြယ္စကားေလးဆိုခဲ့ပါေသးတယ္ ။
ဒါ့အျပင္ သူမဒီဆုေလးကို ရတဲ့အတြက္ သူမကိုခ်စ္တဲ့ ပရိသတ္ေတြအားလုံး ဂုဏ္ယူေနလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္တဲ့ ပရိသတ္ႀကီးေရ ..။
ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ ပရိတ္သတ္ႀကီးလည္း သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ ေန႔ေလးတစ္ေန႔ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္…..
တက္ကသိုလ် နှစ် (၁၀၀) ပြည့် ရာပြည့်သဘင်မှာ မိခင်နဲ့ အတူ ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေး…
ဟန်ဇာမိုးဝင်း၊ တင်မောင်ဆန်းမင်းဝင်းတို့နဲ့အတူ အငြိမ့်မင်းသမီးလေးအဖြစ် မြန်မာအကလေးတွေ ကပြဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ သဇင်ထူးမြင့်…